သီလရှင် အပါး ၃၀၀၀ နဲ့ ကျောင်းတိုက်ပေါင်း ၄၀ ကို တစ်လ ၂ ခါ အလှူလုပ်တဲ့” မြန်မာပြည်က သူဌေးကြီးမိသားစု”… – May News
မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ ဆိုသလို အလှူအတန်းမှာတော့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခုလည်းပဲ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….
အဲတာကတော့ သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်တွေကို သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်အေးမြင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့ကနေပြီး တစ်လကို သီလရှင်လေးတွေအတွက် ၁၀၀၀ တန်က အရွက် ၂၅၀၀ …
၅၀၀၀ တန်ကအရွက် ၅၀၀ ..ပေါင်း ..အရွက်ရေ ၃၀၀၀ …၁၀၀၀ တန် ၅ ရွက်လျှင် ၅၀၀၀ တန်တစ်ရွက်ညှပ် …
အားလုံးအပါး ၃၀၀၀ ခန့်ကို တစ်ပြိုင်ထဲလှူဒါန်းပါတယ်….
ဒီလို အပါး ၃၀၀၀ ကျော်ကို လှူသူ ၁၈ ယောက်ခွဲလှူရင် ၁၀ မိနစ် မကြာဘူးလို့ သိရပါတယ်…
ဒါ့အပြင် သီလရှင် အပါး ၃၀၀၀ မလှူခင်မှာ အသက် ၆၀ အထက် ၅၀ ခန့်ကို ၂၀၀၀ ကျပ်စီ အရင်လှူပါတယ်တဲ့ ယယယယ အများလှူတဲ့အခါမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်ရမည် ၅၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၇၀၀၀ ရပါမယ်လို့ ဆိုပါတယ်…. အလှူက ဒါတင်မကပါဘူး…
ပီးရင် ကျောင်းတိုက်ခွဲ ၄၀ ကို တစ်ကျောင်းလျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်စီ ထပ်လှူပါတယ်…. အရုဏ်ဆွမ်းအပါအဝင် တစ်ခါလှူရင် သိန်း 90 ကျပ် ….တစ်လကို နှစ်ကြိမ်လှူ တော့ သိန်း ၁၈၀ ကျပ် လှူတယ်လို့ သိရပါတယ်…တကယ့်ကို ရက်ရောတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးပါပဲ…
ဒီလို အလှူမျိုးကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရတာပါ…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ခုလို အများကြီးလှူနိုင်အောင် ချမ်းသာကြပါစေနော်………
Source ; ဓမ္မရတနာ
မရွိလို့ မလှူ မလှူလို့မရွိ ဆိုသလို အလှူအတန်းမွာတော့ ရျွှေမန္မာတြေကေတာ့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ္ပျဲဖစ္ပါတယ်…ခုလည်းပဲ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သာဓုခေါ်ဖြယ်အလှူတစ္ခုကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရေအာင်ျပန္လည္မ်ွဝေပးလိုက္ပါတယ်….
အဲတာကေတာ့ သာသနာ့နယ်ြဝင်သီလရွင်တြေကို သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန္နဲ့ ဇနီး ဒေါ်အေျးမင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့ကေနပြီး တစ္လကို သီလရွင်လေးတြေအတြက် ၁၀၀၀ တန္က အရကြ် ၂၅၀၀ …
၅၀၀၀ တန္ကအရကြ် ၅၀၀ ..ပေါင်း ..အရက်ြရေ ၃၀၀၀ …၁၀၀၀ တန် ၅ ရက္လြွ်င် ၅၀၀၀ တန္တစ်ရက်ြညှပ် …အားလုံးအပါး ၃၀၀၀ ခန့္ကို တစ်ပြိုင္ထဲလှူဒါန်းပါတယ်….
ဒီလို အပါး ၃၀၀၀ ကေ်္ကာို လှူသူ ၁၈ ယောက္ခြဲလှူရင် ၁၀ မိနစ် မကြာဘူးလို့ သိရပါတယ်…
ဒါ့အျပင် သီလရွင် အပါး ၃၀၀၀ မလှူခင္မွာ အသက် ၆၀ အထက် ၅၀ ခန့္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္စီ အရင္လှူပါတယ္တဲ့ ယယယယ အမ်ားလှူတဲ့အခါမွာ ၁၀၀၀ က်ပ္က်လ်ွင် ၃၀၀၀ က်ပ်ရမည် ၅၀၀၀ က်ပ္က်လ်ွင် ၇၀၀၀ ရပါမယ္လို့ ဆိုပါတယ်…. အလှူက ဒါတင္မကပါဘူး…
ပြီးရင် ကေ်ာင်းတိုက္ခြဲ ၄၀ ကို တစ်ကေ်ာင်းလ်ွင် ၅၀၀၀၀ က်ပ္စီ ထပ္လှူပါတယ်…. အရုဏ္ဆြမ်းအပါအဝင် တစ္ခါလှူရင် သိန်း 90 က်ပ် ….တစ္လကို နွစ်ကြိမ္လှူ တော့ သိန်း ၁၈၀ က်ပ် လှူတယ္လို့ သိရပါတယ်…တကယ့္ကို ရက်ရောတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးပါပဲ…
ဒီလို အလှူမ်ိုးကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်အောင်ျပန္လည္မ်ွဝေလိုက်ရတာပါ…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ခုလို အမ်ားကြီးလှူနိုင်အောင် ခ်မ်းသာကြပါစေနာ်………
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးများအတွက် ဝမ်းသာစရာ ပြင်ဆင်မှုများ . မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ အားလုံးခံစားစေနိုင်ဖို့အတွက်မျှဝေတာပါ . နှစ်ပေါင်းများစွာကကြားခဲ့ရတဲ့။တည်းခိုဆောင်အခန်းဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စ။ အရင်တုံးက ဈေးပြိုင်စံနစ်နဲ့ ။ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က လေလံပြစ်တယ်။‌ လေလံစွဲယူတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေ အပြိုင်စွဲကြတော့ ဈေးတွေက အဆမတန်မြင့်သွားကြတော့။ သူတို့ကိုက်အောင် (အမြတ်အစွန်းရအောင်)‌ အခန်းခတွေဈေးတင် ။ အခန်းခက တွေဈေးကြီးတော့တာပေါ့။ အခုနှစ်တော့ အဲဒီ့ အခန်းခဈေးကြီးတာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ လေလံစွဲမဲ့ သူတွေအားလုံး ကြမ်းခင်ဈေး သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မဲနှိုက်ပြီး ချပေးလိုက်ပါပြီ။ အခန်းခပိုမတောင်းဖို့လဲ ခိုင်မာတဲ့ဂတိကဝတ်တွေ။ ဒဏ်စံနစ်။ အရေးယူစံနစ်တွေနဲ့ ချပေးလိုက်ပါပြီ။ အခန်းခဈေးကိုလဲ ၁၅၀၀၀ ကျပ်ဈေးသတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒါကိုမှ ‌ဈေးပိုတောင်းရင်လဲ တိုက်ရိုက် တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ ဖုံးနံပတ်တွေကိုလဲ။ အခန်းတွေမှာ။ဘုရားမှာ နဲ့ နေရာအစုံမှာ ကြေငြာထားလိုက်ပါပြီ။နောက်တခုက ရာဇဝတ်မှုတွေ။ ပြသနာတွေ။ […]